Momba anay - Sichuan Yunting International Trading Co., Ltd.
Niorina tamin'ny taona 2008, ny orinasanay dia lasa orinasa orinasa manerantany mahomby miaraka amin'ny foibe any Guangzhou sy ny birao any Chengdu China, miompana amin'ny famaritana ny vokatra fialamboly fiara, dia ny mpilalao DVD fiara, mpilalao DVD fiara manokana, GPS fiara, monitor headrests an'ny fiara miaraka / tsy misy mpilalao DVD, ny valindrihana fiara manidina mpanara-maso, mpamaky DVD sun visor fiara, fakantsary miverimberina, boaty freeview ary efijery fiara hafa na mpanara-maso, koa elektronika feo sy sary hafa, afaka mamaly tsara ny filan'ny tsena iraisam-pirenena amin'ny alàlan'ny fifaninanana isika vidiny, kalitao, fahamendrehana, fandefasana ara-potoana ary fenitra ambony indrindra amin'ny serivisy. Ny mpanjifantsika iraisam-pirenena dia manomboka amin'ny mpandefa an-tsokosoko ka hatrany amin'ny mpivarotra ambongadiny sy mpivarotra ambongadiny. Izy ireo dia afaka mankafy ny fahafaha-mividy fiantsenana tokana amin'ny alàlan'ny fonosana totalin'ny vidiny fanampiny.
Nandritra ny taona maro, nahazo laza izahay tamin'ny fanomezana vokatra kalitao amin'ny vidiny mifaninana indrindra amin'ireo mpanjifa manana filàna sy takiana samihafa amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao.
Mampanantena izahay fa hanohy hivoatra hatrany ary hamaky ny tany vaovao! Mamadika ny nofy ho zava-misy. Ampiasao ny serivisy fandefasana entana avy any Guangzhou na aiza na aiza manerantany hanampy amin'ny fanovana ny nofinofy hanao raharaham-barotra, hampihena ny mety hananana entana marobe ary hamonjy anao amin'ny fampiasam-bola marobe , tahiry fanombohana ary ny sarany fitahirizana. Ny ekipa mpamatsy vola anay dia mety ho vavahadinao amin'ny tontolo mandany fotoana be sy be asa amin'ny vokatra ho an'ny vokatra mety ao anaty tontolo miovaova. Izahay dia natokana ho an'ny etika avo lenta amin'ny loharanom-pahefana, miaraka amin'ireo mpamatsy izay niara-niasa tamina taona maro, izay azo ianteherana amin'ny fahaizana avo lenta sy matanjaka amin'ny famokarana. Manolo-tena izahay hanome antoka fa ny vokatra avo lenta ho an'ny mpanjifa dia atolotra anao ara-potoana sy amin'ny sandany miavaka.